I-Riverside Lodge, ikhabethe lezingodo - I-Airbnb
I-Riverside Lodge, ikhabethe lezingodo
Windermere, England, i-United Kingdom
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Robert
IRiverside Lodge iyikhabethe elihle lezingodo osebeni lomfula iTroutbeck enhliziyweni yeLake District National Park. I-Lodge inamagumbi okulala ama-2 futhi yakhiwe ngokhuni ngokuphelele. I-balcony ezungezile ibheke umfula namagquma angaphesheya.
IRiverside Lodge inendawo yokuphumula/yokudlela ephumulele enezihlalo ezintofontofo nosofa. Kunetafula lokudlela nezihlalo kanye nekhishi elihlome ngokuphelele. Ngaphandle kukhona i-balcony enhle ezungezayo ebheke umfula kanye ne-lakeland falls.
4.78 · 130 okushiwo abanye
Isigodi saseTroutbeck siyisigodi esihle esicezile enhliziyweni yeLake District. Lesi sigodi sinokuthula kakhulu kodwa siqhele ngamakhilomitha ambalwa ukusuka esiphithiphithini samadolobhana adumile iWindermere, Bowness kanye ne-Ambleside nezitolo zabo, izindawo zokudlela, izindawo zobumnandi nokunye okukhangayo.
I-Riverside Lodge itholakala e-Limefitt Park, ipaki yezinkanyezi ezi-5 enezinsiza eziningi. Lokhu kuhlanganisa indawo yokucima ukoma yaseLakeland, isitolo esincane, inkundla yokuhamba izinja, ibhola lezinyawo kanye nezinkundla zebhola le-badminton/volley, inkundla yokudlala, izitebele zamahhashi, ichibi lomfula kanye ne-launderette.
Sitholakala ngocingo noma kunini kodwa asisahlali endaweni (ngeshwa!) futhi cishe ngeke sibe seduze.
Hlola ezinye izinketho ezise- Windermere namaphethelo